Plọ ọrụ PROFILE - MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO. LTD guzobere na 2008. Ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ Interface dabere na ihe mmetụta amamịghe. Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, MEOKON aghọwo China si eduga na ụwa a ma ama na-emepụta nke mgbali ngwá. N'ihe nrụpụta nrụpụta, MEOKON eguzobewo nkà na ụzụ ya na uru ya, karịsịa n'ọhịa nke hydraulic, mgbapụta na ngwa ikuku ikuku, MEOKON abụrụla akara China.
Ihe anyị na-eme？
MEOKON bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na nke ọhụrụ yana ngwaahịa ndị na-eduga: nlele nrụgide dijitalụ, mgba ọkụ nrụgide dijitalụ, onye na-achịkwa nrụgide ọgụgụ isi, ihe mmetụta sensọ na nrụgide nrụgide, akụrụngwa. Ọ bụ setịpụrụ R & D, imewe, mmepụta na ire ere n'otu ngalaba. Anyị nwere ihe karịrị ụdị 100 nkọwa nke ihe mmetụta na mgbasa ozi. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, ụdị ihe mmetụta dị iche iche, ngwa njikwa ngosi yana sistemu njikwa nwere ike ịhazi. A na-ejikarị ngwaahịa MEOKON eme ihe na mpaghara ndị a: ikuku ikuku, ọrụ ụgbọ ala, spurt & hydraulic pressure, sistemụ mmiri, na-etinye aka na ihe mmetụta dị iche iche, na-ebugharị akụrụngwa, nha na ịchịkwa ngwa, usoro nnweta ụbọchị. rụrụ site na usoro mmepụta dum. Ngwaahịa anyị ruru eru maka ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dịka CE, CPA. Ndị ọzọ, anyị nwere ezigbo ndị ọrụ na omenaala ụlọ ọrụ: nzukọ egwuregwu, mmemme ọdịnala, oriri na ọ ,ụ ,ụ, njem na ihe ndị ọzọ. MEOKON ji ezi obi na-atụ anya nkwado gị!
Ngwa akụrụngwa Hi-Tech
Anyị isi n'ichepụta ngwá na-imported kpọmkwem site US na Germany
Anyị nwere 20 injinia na anyị R&D center, 7 software engineer, na 13 ngwaike injinia.
Njikwa mma dị egwu
Anyị ga-eme nlezianya ịlele maka abata na-eme 100% na-abata ịlele.
Ahaziri ngwaahịa dị. Nabata ịkọrọ anyị echiche gị, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ kee ihe.
Anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30 nọ n’ọgbakọ ma ha niile na-azụ ọzụzụ nke ọma. Imirikiti ngwa ule anyị na-esite na US na Germany nke ga-eme ka anyị zie ezi. Mmepụta kwa afọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400,000 iberibe (2018).
Ngalaba R & D
R&D bụ ngalaba nọọrọ onwe ha na ụlọ ọrụ anyị yana ọ na-arụkwa nnukwu ọrụ na mmepe anyị. Companylọ ọrụ anyị nwere ihe dị ka injinia 20, ndị injinia ngwanrọ 7, yana ndị injinịa ngwaike 13. Corelọ ọrụ PCB na ụlọ ọrụ algorithms niile na-arụ ọrụ site na ndị injinia n'onwe ha! N'okpuru bụ ụfọdụ foto maka ama gị
MEOKON ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 70 na ihe karịrị 80% nọ na nzere bachelọ.
Akara ụwa na-akwado site na ọdịbendị ụlọ ọrụ. Anyị ghọtara nke ọma na ọdịbendị ụlọ ọrụ ya nwere ike ịmalite site na Mmetụta, Ntinye na Mwebata. Nkwado nke otu anyị akwadoro site na ụkpụrụ ya na afọ ndị gara aga -------Innovation, iguzosi ike n'ezi ihe, nkwado, Oru oma.
Innovation bụ mkpụrụ obi.
Innovation na eme ka anyi di iche
Anyị na-aga n'ihu ịmepụta ngwọta ọhụrụ iji gboo mkpa ndị ahịa ma zute ihe ịma aka ọ bụla
iguzosi ike n'ezi ihe
Ime ihe n'eziokwu abụghị naanị omume ọma, kamakwa mmụọ ọkachamara
MEOKO chọrọ ndị na-akwụwa aka ọtọ, onye eziokwu, ụlọ ọrụ na-akwụwa aka ọtọ, nwere ike jiri nwayọ nwayọ nwayọ, mana ọ ga-akwụsi ike
Usoro ndị dị irè ga-eme ka anyị dịkwuo irè na ọrụ. Usoro ịrụ ọrụ nke ọma na njikwa oge kwesịrị ekwesị nwere ike ịrụ ụdị ọrụ niile
Otu mmụọ bụ isi nkuku nke ọsọ anyị mmepe;
Na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-amụta site na ibe ibe ha iji mejupụta adịghị ike ha iji nye egwuregwu zuru oke
Offọdụ n’ime ndị ahịa anyị
ỌR AW NA-EME NA ND TE KWESAMR CON KWES TOR TO KWES TOR TO KWES CLRUR ND O ỌRUR ANY!!
Asambodo nke Companylọ Ọrụ Anyị na Patfọdụ Ikike nchọpụta
Lọ ọrụ akwụkwọ
Ngosi anyị na-aga
Ọrụ Nkwalite Ndị Ahịa
•Ajuju na nyocha nkwado, ihe karịrị afọ 10 na ahụmịhe ọrụ aka
•Otu-na-otu sales engineer oru ọrụ
•Ọrụ ntanetị dị na 24h, zara na 8 awa
•Nka na ụzụ ọzụzụ ngwá ọrụ
•Ntinye ma wepu nsogbu
•Mmezi melite na mmelite
•Akwụkwọ ikike otu afọ. Nye oru nkwado free niile ndụ nke ngwaahịa
•Nọgidenụ na-akpọtụrụ ndị ahịa niile, nweta nzaghachi maka akụrụngwa ma mepụta ngwaahịa dị mma na-aga n'ihu